Abuuritaanka Maison Décotterd waxaa u dabbaaldega Machadka Tacliinta Sare ee Glion
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Abuuritaanka Maison Décotterd waxaa u dabbaaldega Machadka Tacliinta Sare ee Glion
Saddex bilood ka dib markii Stéphane Décotterd uu ku biiray Machadka Tacliinta Sare ee Glion, Chef-ka abaal-marinta badan leh oo ay weheliso machadka dugsiga martigelinta sharafta leh ayaa u dabaaldegaya abuurista Maison Décotterd. Maison Décotterd waa meel loo yaqaan gastronomic oo leh saddex meelood oo u gaar ah oo ay ku jiraan maqaayadda gastronomic Stéphane Décotterd oo leh muuqaalkeeda xiisaha leh ee harada Geneva; Bistro -ka uu qoray Décotterd, naxaasta qaaliga ah; iyo Barkii Qolka ee Décotterd oo leh suxuuntiisii ​​macaanayd iyo xulashada khamri ee galaaska.
Labada maqaayadood ee aadka u wanaagsan, oo ku yaal Hotel-kii hore ee Bellevue ee Glion, waxay isku duubnaadaan aragtida Michelle ee xiddigle Stéphane Décotterd ee ku aaddan cunnada gobolka, waarta, iyo asalka ah. Iyada oo la ixtiraamayo falsafadiisa, wuxuu ku hogaamiyaa kooxdiisa hagaajin joogto ah, dib -u -cusboonaysiinta xeerarka gastronomy. "Cunnadaydu hubaal waa gobol, waara oo asal ah, haddana had iyo jeer way kobcaysaa, sida biyaha haradaas oo aad ii dhiirrigeliya," ayuu yidhi Stéphane Décotterd.
Laga soo bilaabo 2016, Stéphane Décotterd wuxuu ku tiriyaa guutadiisa da 'yarta Cuntada Chef Christophe Loeffel, oo ku guuleystay abaalmarinta "Chef Pâtissier ee sanadka 2021" oo ka socda Gault & Millau Switzerland iyo "Macmacaanka Naxaasta 2020" ee horyaalnimada qaranka Faransiiska ee macmacaanka. Wuxuu dhawaan ka qeyb galay tartankii “Patissier des Jahres” ee ka dhacay Cologne, Germany, wuxuuna ku dhameystay kaalinta labaad. Cunto -yaqaanka da 'yarta ah ee ballan -qaadka ah ayaa durba soo saaray saxiixiisa, isagoo la shaqeynaya joomatari, qaab -dhismeed, iyo fududeyn. “Had iyo jeer waxaan isku dayaa inaan ku daro taabashada asalka ah oo aan sheeko u sheego alaabada. Waxaan muhiimad weyn siinayaa sidii aan u iftiimin lahaa dhaqanka aan ku jiro, si aan u isticmaalo alaabada gobolka, ”ayuu horumariyaa Christophe Loeffel.
Qolka maqaayadda, adeegga waxaa hubiya Stéphanie Décotterd, Agaasimaha Maison Décotterd, iyo kooxdeeda. Waxay bixisaa adeeg leh tilmaamo si fiican u xeeldheer, iyadoo leh hab shaqsiyeed, oo martida siisa waayo -aragnimo lama ilaawaan ah. U hibeyntaan heer sare iyo isku -kalsoonaanta, ayaa u oggolaatay Stéphanie inay ku guuleysato abaalmarintii ugu horreysay ee Michelin Swiss ee martigelinta iyo adeegga, bishii Febraayo 2019.
Ballanqaad heer sare ah, Maison Décotterd wuxuu ku faraxsan yahay inuu qayb ka noqdo Relay Qasriyada urur, ku biiritaanka shabakad ka kooban 580 hoteel iyo maqaayado u gaar ah adduunka oo dhan, oo ay leeyihiin oo ay maamulaan ganacsato madax bannaan oo aad u jecel farsamadooda oo si qoto dheer uga go'an inay la yeeshaan martidooda xiriir diirran oo waara. Sida cunnooyinka iyo falsafadda Stéphane Décotterd, xubnaha Relais & Châteaux waxay ilaaliyaan oo kor u qaadaan maalka iyo kala duwanaanshaha dhaqamada cunnada iyo soo dhoweynta ee adduunka, si loo hubiyo inay sii kobcaan. Waxay si isku mid ah ugu heellan yihiin ilaalinta hiddaha maxalliga ah iyo bay'ada, sida lagu qeexay Aragtida ururka ee loo soo bandhigay UNESCO bishii Nofeembar 2014.
Ardayda Glion waxay si weyn uga macaashaan sameynta laba makhaayadood oo saxeex ah oo ku yaal xerada Glion, iyagoo siinaya waaya -aragnimo cunno oo cusub iyo sidoo kale fursad u gaar ah oo ay wax kaga bartaan kartida cuntada ee gaarka ah, iyagoo ka faa'iideysanaya tababarka gaarka ah ee jikada, adeegga, iyo baarka. Isla mar ahaantaana, xarumihii Switzerland ee Glion ayaa dib loo habeeyay si kor loogu sii qaado waayo -aragnimada ardayga.